लकडाउनमा मानसिक स्वास्थ्यः प्रा.डा.शर्मा भन्नुहुन्छ यसलाई अवसरको रुपमा लिउँ – OM Hospital
लकडाउनमा मानसिक स्वास्थ्यः प्रा.डा.शर्मा भन्नुहुन्छ यसलाई अवसरको रुपमा लिउँ
संसारको आधा जनसंख्या अहिले लकडाउनमा छ। कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्न नेपाल पनि दुई सातादेखि बन्दाबन्दीमा छ। सबैतिर यस्तो परिस्थितीमा तनाव नलिने तथा खुशी भएर बस्नुपर्छ भन्ने सुझाव आईरहेछन्।
मानिसमा तनाव चाहेर हुने होइन। परिस्थितीले बनाउने हो। अहिलेको अवस्था नै त्यस्तै छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन्छ कि भन्ने डर छ।
अहिले सबै ठीक भएपनि भोली के होला? कसो होला? भन्ने चिन्ता पनि छ। विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै खालको तनाब होला, ब्यापारीहरूलाई अर्को खालको। सबैलाई आ-आफ्नो परिस्थिती अनुसारको तनाव छ।
यो हठात रूपमा आएको परिस्थिती हो। एक्कासी यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। विश्वभरका टेलिभिजन तथा समाचार हेर्ने भने सबैमा यही कोभिड-१९ को मात्र कुरा भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल हेर्‍यो भने पनि यसैको मात्र चर्चा छ। कोरोनाबाट बच्न यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस् भन्ने सुझाव मात्र आइरहेका छन्।
मानिसहरू अहिले तीनवटा चिन्ताले पिरोलिएका छन्।
पहिलो चिन्ता, यो लकडाउन कहिलेसम्म हुने हो, के हुने हो ?
दोस्रो चिन्ता, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह साँच्चै हो कि ?
तेस्रो चिन्ता, कोभिड–१९ महामारी पछिको भविष्य के हुने हो ?
अहिलेको अवस्थामा पहिलेदेखी नै मानसिक समस्या भएका वा औषधी खाइरहेका बिरामीलाई विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ।
औषधी नियमित खाइरहेकाहरूले औषधी छोड्नुहुँदैन। अहिलेको जटिल अवस्थामा परिवारले पनि पहिलेदेखि नै औषधी खाइरहेका व्यक्तिहरूको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ।
लकडाउनको परिस्थितीमा सबैजना घरभित्र बस्न बाध्य छन्। फुर्सदमा छन्। के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता बढेको छ। तर, यस्तो बेलामा सामाजिक सञ्जालमा धेरै सक्रिय नुहुनु राम्रो हो। सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक समाचारहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यस्तोलाई वेवास्ता गर्दा राम्रो हुन्छ। आधिकारिक सूचनाहरू मात्र लिनुपर्छ।
जस्तै कोभिड-१९ को बारे नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना मात्र ग्रहण गर्दा राम्रो हुन्छ। भरपर्दा सञ्चारमाध्यमका समाचार मात्र पढ्ने बानी बसाउनु उपयुक्त हुन्छ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले कोभिड-१९ महामारीबाट जोगिन भन्दै आएका सुझाव उच्च र मध्यमवर्ग लक्षित छन्। निम्न वर्गका मानिसहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ।
यो महामारीको अवस्था सधैँ रहँदैन। हामी यो परिस्थितीबाट बाहिर निस्कन्छौं भन्ने मानसिकतामा बस्नुपर्छ।
अहिले एकदमै कठिन अवस्था छ। तर सधै यसरी बस्नुपर्ने होइन। एउटा निश्चित समयपछि यो संकट टरेर जान्छ। महामारी आफै कम हुँदै जान्छ।
यस्तो परिस्थिती अहिले मात्र उत्पन्न भएको होइन। पहिले पनि आएका थिए। तर, हाम्रो पुस्ताले भने अहिले पहिलो पटक अनुभव गरेको छ। त्यसैले अहिले धेरै डराएको जस्तो देखिन्छ। धेरै डराउनु पर्दैन, सचेत भए पुग्छ। यस्तो अवस्थामा एकले अर्कोलाई सकेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्था समस्या मात्र पनि होइन। अवसर पनि हो, परिवारसँग समय व्यतित गर्ने, किताबहरू पढ्ने, योजनाहरू बनाउने। तर सधै एउटै कुरा गरिरहँदा हामीलाई मोनोटोनस हुनसक्छ। त्यसैले हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ। फरक फरक काम गर्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थाले बालबालिकालाई पनि मानसिक असर पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ। स्कुलहरू बन्द भएका छन्। यो बीच साथीभाइहरूसँगको भेटघाट टुटेको छ। बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। एकाएक दैनिकी परिवर्तन भएको छ। त्यसकारण उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
आफुमा भएको चिन्ता वा त्रास बालबालिकालाई नदेखाउँदा राम्रो हुन्छ। यसको अर्थ उनीहरूसँग कुरा लुकाउने भनेको होइन। बालबालिकासँग कुरा लुकाउन हुदैन। सबै कुरा खुलस्त भन्नुपर्छ। तर, बच्चाहरूको उमेरअनुसार सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ।
साना बच्चाहरूलाई कसरी सम्झाउने तरिका छुट्टै होला। त्यस्तै स्कुल जाने ७, ८ कक्षामा पढ्नेहरूलाई, कलेज पढ्नेहरूलाई सम्झाउने बुझाउने तारिका फरक हुन सक्छ।
चुरोट सुर्ती, तथा जाडँ रक्सी खानेहरूका लागि त्यसको लत छुटाउन पनि यो राम्रो अवसर हो। अहिले सबै बन्द छन्। धेरै टाढा जान पनि गाह्रो छ। त्यसकारण त्यस्ता कुलतहरू छुटाउनका लागि यो राम्रो अवसर हुन्छ।
कोभिड-१९ बाट बच्न सामाजिक दूरी कायम राख्ने भनिएको छ। त्यसको मतलब साथीभाइसँगको सम्बन्धमा दूरी बनाउने भनेको होइन।
भौतिक दूरी कायम राखे पनि साथीभाई आफन्तसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने हो। बारम्बार कुराकानी गर्ने हो। आफ्नो भावनाहरू साट्ने हो।
विदेशमा बसेका आफन्त तथा साथीभाईसँग कुराहरू शेयर गर्ने गर्नुपर्छ। उनीहरूको कुरा सुन्ने, व्यायाम गर्ने, ध्यान गर्ने पनि गर्नुपर्छ। ध्यानले धेरै फाइदा पुग्छ।
(प्रा.डा.शर्मा काठमाडौं चावहिल स्थित ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका सिनियर कन्सल्ट्यान्ट साइकाइट्रिस हुनुहुन्छ ।)